Ukuphumula KweSabatha Okuzayo - Ukubalwa KweMbuso
Ukuphumula KweSabatha Okuzayo
Sekuyiminyaka engama-2000 iBandla lisebenza kanzima ukudonsela imiphefumulo esifubeni sakhe. Ubekezelele ukushushiswa nokukhashelwa, izihlubuki kanye ne-schismatics. Udlule ezikhathini zodumo nokukhula, ukwehla nokwehlukana, amandla nobumpofu ngenkathi ememezela ngokungakhathali iVangeli - uma kwenzeka ngezinye izikhathi ngensali. Kodwa ngolunye usuku, kusho oFata BeSonto, uyojabulela “Ukuphumula KweSabatha” - Inkathi Yokuthula emhlabeni ngaphambi ukuphela komhlaba nangemva kokuwa kwengcindezelo yomhlaba ebizwa nge "silo." Kodwa kuyini ngempela lokhu “kuphumula”, futhi kubangelwa yini?
Funda Ukuphumula KweSabatha Okuzayo nguMark Mallett ku- IZwi Manje.
Posted in Okusuka Kwabahlinzeki Bethu, Imilayezo, IZwi Manje.
← IValeria - Kukhona Ngempela…
UGisella - Inkolo Entsha… →